Bilie Ọdịnaya Gị Bipụtara Ọsọ na Atụmatụ Ntuziaka Atụmatụ a | Martech Zone
Visuals bụ ihe dị mkpa nke ọdịnaya ahịa ọ bụla. Foto, eserese, akara ngosi - ha niile na-anọchite anya akara gị site na atụmanya mbido atụtụ aka na webụsaịtị gị na akwụkwọ akụkọ ndị ahịa gị. Mgbe ị na-arụ ọrụ na imepụta ozi ịntanetị ndị ọzọ na-adọrọ mmasị, ozi blọọgụ na-enye ihe ọmụma, yana ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịkwesighi ichegbu onwe gị ebe ị ga-achọta onyonyo dị mma iji.
Ekwela ka ihe nlere na-egbochi gị ime ka ọdịnaya dị mma n'èzí. Jiri ndụmọdụ ndị a mee ka ịhazi ma jikwaa njikwa na ịkekọrịta ọdịnaya gị anya.
Iji usoro faịlụ ziri ezi - gbanwee akpaaka faịlụ. Iji usoro faịlụ kwesịrị ekwesị na nha maka ọrụ ahụ dị mkpa. Ọ bụ otu n'ime ihe mgbe emechara nke ọma, anaghị ahụ ya mana mgbe emere ihe ọjọọ na-apụta ma na-eme ka ika gị dị njọ. Gbalịa mee obere ọrụ JPEG ka ọ rụọ ọrụ n’ihi na ọ bụ ihe niile ị nwere? Ee, ọ bụghị mma. Nbudata faịlụ, imeghe ngwa foto, gbanwee nha, chekwaa ya dị ka faịlụ ọhụrụ, na ibudata maka iji ya na-ewe oge ma mepụta faịlụ abụọ. Inye mgbanwe ntụgharị ma ọ bụ njikọ njikọ maka weebụ bụ nchekwa nchekwa oge.
Sharingkekọrịta onyonyo - Nweta ọrụ onwe onye. Ozi ịntanetị na azụ dị iche iche maka arịrịọ na usoro dị iche iche na-ewe oge maka ndị ọzọ. Mee ka ndị otu gị nweta ihe niile ha chọrọ n’otu ebe. Enweghị nchere ọzọ maka foto kwesịrị ekwesị iji nweta afọ ojuju n'ọnụ ụzọ.
Imageschọta onyonyo - Tinye Metadata maka nyocha ọsịsọ. Ingchọta ihe oyiyi kwesịrị ekwesị nwere ike ịbụ ọgụ na mgba. Ebee ka ọ dị? Kedu onye nwetara ya? Gịnị ka a na-akpọ ya? Ọbụna usoro nchekwa nchekwa kachasị mma nwere ọghọm ya. Ihe onyonyo ị nwere, karie folda ị ga-egwu. Metadata na-eme nchọta na ịchọta faịlụ ọsọ ọsọ. Ọ bụrụ na ị na-amalite na metadata, itinye Keywords na nkọwa bụ ebe dị mma ịmalite. Chee echiche banyere ihe ndị ọrụ gị na-achọ na ihe na-egosipụta ihe oyiyi. Ọ bụrụ na ị na-eji foto foto ma ọ bụ ndị ọkachamara ọkachamara, faịlụ gị nwere ike ịnwe metadata dị na ha. Ugbu a ihe niile ị chọrọ bụ ngwá ọrụ na-enye gị ohere ịchọ na iyo site metadata.
Otu esi amalite itinye ihe ndia taa
Ohere inweta bụ, akwụghị gị ego idobe ọdịnaya ahịa gị niile ahazi mana ọ bụ ihe ekwesịrị ịme. Jiri ngwa ọrụ na - emere gị ya, na - ejighị oge gị ma ọ bụ oge IT wee hazie ya. Otu ngwá ọrụ na-eme njikwa ihe oyiyi na ịkekọrịta ọsọ ọsọ ma dị mfe Smartimage.
Anyị wuru Smartimage n'ihi na obere azụmaahịa na otu chọrọ ụzọ dị mfe isi mee, ịhazi, na ịkekọrịta ọdịnaya anya. Ngwaọrụ onwe onye anaghị enye njikwa na mgbanwe ha chọrọ; ebe ha enweghị mkpa ma ọ bụ enweghị ike ị nweta arụmọrụ niile nke ezigbo ihe ngwọta Digital Asset Management. Anyị achọpụtala na obere ụlọ ọrụ na ndị otu na-achọ ihe dị mfe, ọkachamara, na ọnụ ọnụ. Nate Holmes, Smartimage
Smartimage bụ ngwa dị mfe, igwe ojii na-ewu maka obere azụmaahịa na otu ndị chọrọ ịnweta, jikwaa, na ịkekọrịta foto na ọdịnaya anya ndị ọzọ.
Lelee onwe gị, na Chọgharịa mmekọrịta mmekọrịta Smartimage.
Smartimage gbasara mkpokọta Page nzacha
Smartimage Portal Omenala
Ozi Njikwa Smartimage
Tags: damnjikwa ihe onwunwe dijitalụoyiyi ntụgharịnjikwa ihe onyonyonhazi usoro ihe oyiyinjikwa ihe oyiyioyiyi meta datanchekwa fotonate holmessmartimagegbasaa